पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार हुने हो भने हामी नजिकका सबै निजी विद्यालय सुकाइदिन्छौं – EducationPati – A complete news portal on Education in Nepal
पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार हुने हो भने हामी नजिकका सबै निजी विद्यालय सुकाइदिन्छौं
लेखक : डा. गीता खरेल
२१ जेष्ठ २०७७, बुधबार रत्नराज्यलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय
अरु सामुदायिक विद्यालय भन्दा रत्नराज्य के मानेमा फरक छ ?
हामी अन्य विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भन्दापनि आफूले राम्रो गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । हामी जागिरे मानसिकताभन्दा माथि उठेर निरन्तर विद्यालय सुधार अभियनमा छौं । सामुदायिक विद्यालय पनि निजीभन्दा कम छैनन्, अझ राम्रा छन र धेरै राम्रा काम गर्न सक्छन् भनेरै लागिएको अवस्था छ । त्यसैले, हाम्रो प्रतिस्पर्धा पनि सामान्य रुपमा अन्य सामुदायिक विद्यालय भन्दा पनि निजी विद्यालयहरुसँग नै हो । यस वर्ष हामीले ५७५ जना नयाँ विद्यार्थी भर्ना गरेका छौं । जसमा ४५० बढी निजी विद्यालय छाडेर आएकै विद्यार्थीहरु छन् । भवन अभावमा हामीकहाँ भर्ना नपाएर सयौं निजी विद्यालयका विद्यार्थी फेरि उतै फर्केका छन् ।
विद्यालयका राम्रा अभ्यासहरुे के–के छन् ?
मैले अघि नै भनेँ नि, हाम्रो प्रतिस्पर्धा निजी विद्यालयसँगै हो । हामी सकभर निजी विद्यालयभन्दा कम सुविधा र शिक्षा दिन नपरोस् भनेर निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएका छौं । हामीकहाँ अंग्रेजी मध्यममै पठनपाठन हुने गरेको छ भने कक्षा ३ देखि नै कम्प्यूटर शिक्षा दिँदै आएका छौं । मल्टिमिडिया र प्रोजेक्टरको माध्यमबाट सिकाउँदै आएका छौं । हाम्रो विद्यालयमा विद्यार्थीले मात्रै होइन, शिक्षकले समेत गृहकार्य गर्नुहुन्छ । भोलि के पढाउने, के शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्ने, इन्टरनेटबाट के खोजेर पढाउने, कसरी पढाउदा बुझ्छन् भनेर पूर्व तयारी गरेपछि मात्रै शिक्षकहरु कक्षाकोठामा प्रवेश गर्नुहुन्छ । विद्यार्थीहरुलाई डायरी उपलब्ध गराएका छौं । अभिभावकले गृहकार्य आफैं चेक गर्ने, गरे/नगरेको हेर्ने गर्नु हुन्छ । इन्टरनेट र पुस्तकालयमा आधारित सिकाइ गर्दै आएका छौं । विभिन्न हाउसमा छुट्याएर विद्यार्थीहरुलाई अतिरिक्त क्रियाकलाप र परियोजना, खोजमुलक कार्यमा समेत सहभागी गराउँदै आएका छौं । हामी कक्षाकोठको सुधारमै बढी केन्द्रित हुँदै आएका छौं । त्यसैले, हाम्रा एसइइ परीक्षाको नतिजा र अन्य कक्षाहरुको सिकाइ उपलब्धि उत्कृष्ट रहँदै आएको छ । हामी पाठ्यपुस्तकमा मात्रै सीमित भएर सिकाउँदैनौं । पाठ्यक्रममा आधारित भएर आवश्यक सबै सिकाउँछौं । हामी विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षण सिकाइ गर्दै जीवनपयोगी सीप दिन्छौं ।
वास्तविक रुपमा भन्ने हो भने सिकाइ र भौतिक पूर्वाधारको नजिकको सम्बन्ध हुन्छ । विद्यालय परिसर, कक्षाकोठा, खानेपानी, शौचालय, खेलमैदान, शान्त वातावरण आदिले शिक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्छ जस्तो लाग्छ । हामीकहाँ विद्यार्थीको चाप थेगिनसक्नु छ । हामीले भौतिक पूर्वाधार र कक्षाकोठाको अभावमै आएजतिका विद्यार्थीहरु भर्ना गर्न सकिरहेका छैनौं । हामीकहाँ अहिले २१ सय विद्यार्थी छन् । कक्षा नौमा ए,बि,सि,डि र इ गरी पाँच सेक्सन बनाएर पढाइरहेक छौं । अन्य कक्षाहरुको हालत पनि त्यस्तै छ । यदि हामीकहाँ पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार हुने हो भने हामी नजिकका सबै निजी विद्यालयहरु सुकाइदिन्छौं । यो हाम्रो घमण्ड होइन । गरेरै देखाउनेछौं ।
सामुदायिक विद्यालयका खास समस्याहरु के हुन् ?
सामुदायिक विद्यालयका हामी शिक्षकहरु जागिरे मानसिकताका भयौं । हामीलाई हामीभित्रको योग्यता र जिम्मेवारीको बोध भएन । समुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु एक से एक छन् । सामुदायिकमा जागिर खान नपाएपछि मात्रै शिक्षकहरु निजीमा जाने हुन् । तर, त्यहाँ पेशाको सुनिश्चिता नभएकाले पेशा जोगाउन शिक्षकहरु मिहिनेत बढी गर्छन् । तर, तिनै शिक्षकहरु सामुदायिकमा आए फेरि अल्छि बन्छन् । सुविधा पनि धेरै छ । जागिरको सुनिश्चिता पनि धेरै छ । तर, शिक्षकमा जिम्मेवारी बोध भएन । दलको झण्डा बोक्ने, राजनीति गर्ने र दलकै आडमा अल्छि गर्ने शिक्षकहरुका कारण सामुदायिक विद्यालयहरुले अपेक्षित सुधार गर्न नसकेका हुन जस्तो लाग्छ । हामीकहाँ विद्यालय समयमा राजनीति गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध छ ।
मुख्य कुरा गुणस्तरीय सिकाइ नै हो । अभिभावकहरु आधा पेट खाएर पनि सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिन चाहन्छन् । सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ स्तर कमजोर भएकाले नै अभिभावकहरु निजी विद्यालयप्रति आकर्षित भएका हुन् । यदि हामीले सामुदायिक विद्यालयको सुधार ग¥यौं भने निजी स्कूलहरु आफैं बन्द हुन्छन् । हामीकहाँँ उद्योगी, व्यापारीदेखि लिएर सांसदसम्मका छोराछोरी पढिरहेका छन् । धेरै अभिभावकहरुले निजीबाट झिकेरसमेत यहाँ भर्ना गर्नुभएको छ । हाम्रो र निजी स्कूलबीच अन्तर नपाएकाले नै यो विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास बढ्दै गइरहेको छ । हाम्रा शिक्षकहरुले समेत निजी विद्यालयबाट झिकेर छोराछोरी यहाँ भर्ना गर्नुभएको छ । हाम्रो विद्यालयमा पाँचजना सांसदका छोराछोरीसमेत अध्ययन गरिरहेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयले निजीसँग कहिले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने होलान् ?
न सबै निजी विद्यालयहरु उत्कृष्ट छन् न त सबै सामुदायिक विद्यालयहरु कमजोर नै । हो, निजीले राम्रो गरेका छन् । तर, उनीहरुले राम्रो गरेका छन् भन्दैमा त्यसबाट डराउने, रिस गर्ने, हरेश खाने होइन । उनीहरुले कसरी राम्रो गरेका हुन् भनेर उनीहरुको राम्रा अभ्यास सिक्ने हो । अमृत रोपेपछि विष फल्दैन । राम्रो गरे राम्रै परिणम आउने हो । यदि नराम्रो परिणम आयो भने हामीले राम्रो गरेनछौं भनेर सुधार गर्ने हो । निजी विद्यालयहरु बन्द गर्नु समाधान होइन, सामुदायिक विद्यालयहरु राम्रो गर्न सके निजी आफैं बन्द हुन्छन् । त्यसैले सामुदायिक विद्यालय सुधारमा लाग्नै पर्छ । यो असम्भव छैन । मिहिनेत गर्नुप¥यो ।
ठूलो भूमिका रहन्छ । समुदायको सहयोग, चासो र सहकार्यविना विद्यालय आफैंले कायापलट गर्न सक्दैनन् । भूकम्पले भवन भत्काएपछि हामी नयाँ भवनका लागि सहयोग माग्न अभिभावकहरुको घर–घर धायौं । शुरुमा मैले एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरेर थालनी गरे । पछि एक अभिभावक एक ईंट्टा सहयोग अभियान चलायौं । अभिभावकहरुले धेरै सहयोग गर्नुभयो । हामीले भवन बनाउन सक्यौं । सांसद राधेश्याम अधिकारीले त तीनै वर्षको सांसद विकास कोषको रकम सहयोग गरेर हामीलाई भवन, सभाहल र ग्राउण्ड बनाउन सहयोग गर्नुभयो । विद्यालयमा खानेपानी, शौचालयदेखि डेस्क–बेञ्चसम्म समुदायले सहयोग गरेको छ ।
कमी नै भएको हो भन्ने त लाग्दैन । तर, विद्यालय सुधारका लागि असल नेतृत्वको आवश्ययकता भने पर्छ । सही नेतृत्वको सही निर्णय र प्रयासबाटै सुधार हुने हो । प्रधानाध्यापक, विव्यस अध्यक्ष, शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्षलगायतका नेतृत्वले आफ्नो भूमिका पूरा नगरेकाले नै समस्या आउने हो । हाम्रो विद्यालयको सन्दर्भमा नेतृत्वको टिमवर्क छ । अझ शिक्षक र विद्यार्थीको पनि टीमवर्क छ । स्वार्थभन्दा माथि उठेको नेतृत्वले नै अरुभन्दा फरक गरेर देखाउने हो । राजनीतिमुक्त नेतृत्व आवश्यक छ । विद्यलयमा हामी सबैको चिन्ता, चासो र क्रियाकलाप गुणस्तरीय सुधारमा केन्द्रित रहँदै आएको छ । त्यसैले, परिणाम पनि राम्रै देखिएको छ ।
अन्य सामुदायिक विद्यालयहरुलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा इच्छा शक्ति नै हो । अनि निरन्तरको मिहिनेत हो । सुधार गर्ने हामीले नै हो । अरु कोही आउँदैन । गरे असम्भव भन्ने कुरा केही छैन । स्वार्थबाट माथि उठे अनि निरन्तर शिक्षण सिकाइ सुधारमा लाग्ने हो भने परिणाम राम्रै हुन्छ ।
विद्यालयको अबको योजना ?
हामी योजना र लक्ष्य मात्रै बनाउँदैनौं । पूरा नभएसम्म निरन्तर खट्छौं । र त्यो पूरा गरेरै छाड्छौं । हामीले पाँच वर्षभित्र टाढाका विद्यार्थीहरुका लागि विद्यालयमा होस्टेल बनाउने, एउटा स्कूल बसको व्यवस्था गर्ने, हाम्रा समुदायका एकजना पनि विद्यार्थी अन्य विद्यालयम जानु नपर्ने वातावरण बनाउने लक्ष्य राखका छौं । साथै, एक शिक्षक एक ल्यापटपको व्यवस्था गरी शिक्षक–विद्यार्थी र सिकाइलाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजना छ । यसका लागि दाताहरुसँग सहयोगको अपेक्षासमेत गर्दछु ।
२०७४ साउन २ गते ०१:३५मा प्रकाशित